The Facebook Times: ထူးအယ်လင်းကို သေတာတောင် ပြန်မပေါင်းဘူးလို့ မီးမီးခဲပြော
ထူးအယ်လင်းကိုတော့ မီးမီးခဲက သေတဲ့ အထိ ပြန်မပေါင်းနိုင်ပါဘူးတဲ့။
ထူးအယ်လင်းနဲ့ မီးမီးခဲ တို့ရဲ့ လင်မယားခန်းလည် တရားရုံးမှာ သိပ်မကြာသေးခင်က ကွာရှင်းခွင့် တောင်းခဲ့
ပြီး ကွားရှင်းခွင့် ရခဲ့တာ ဧပြီလက ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ကွာရှင်းခွင့် တောင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာ မီးမီးခဲက ထုတ်ပြောခဲ့ဖူးပြီးသားပါ။ ဒီအကြောင်း ဧရာဝတီကလည်း တင်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
Ja Awng Nan Hpunggan and 10,961 others like this.
Nay San သတင်းမီဒီယာဆိုတာက မီဒီယာကျင့်ဝတ်နဲ.အညီ ရေးဖို.၊ပြည်သူတွေကို အသိပညာ၊အတတ်ပညာတွေဖြန်.ဝေပေးဖို.လက်နက်တစ်ခုလို. ကျွန်တော်မြင်မိပါသည်။သူများအိမ်ထောင်ရေးကိစ္စကို သိလို.ပဲဖြစ်ဖြစ်၊မသိလို.ပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုပြီးတော့ စည်းစောင့်စေချင်တယ်လို.ပဲ အကြံပြုစေချင်ပါတယ် ဧရာဝတီ ဘလော့ဒ် ဂျာနယ်မှ သတင်းထောက်များနှင့်အယ်ဒီတာများ ခင်ဗျား။
Like · Reply · 104 · July 29 at 11:27pm
Thar Thar သူများ အိမ်ထောင်ရေး ဝင်မပါကြပါနဲ့ ဗျာ သူတို့ ဘာသာ သူတို့ ရှင်းကြပါလိမ့်မယ် ကိုပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင်းလဲ သူတို့ မှာ ဘေးဥပါဒ်သင့်ရင် ကိုယ်ကကြားနေရင် အကုသိုလ်စြစ်နေပါ့မယ်........
Like · Reply · 105 · July 29 at 11:04pm
သူ ရိန် ပြန်မပေါင်းပေါင်းပြန်ပေါင်းပေါင်း ခင်ဗျား သတင်းဌာနနဲ့ မဆိုင်ဘူး ..Admin စိတ်ဓါတ် အောက်တန်းကျတယ် ..ဒါသတင်းမဟုတ်ဘူး သူများ အိမ်ထောင် အတွင်းရေးကိစ္စ..မတင်သင့်ဘူး..
Like · Reply · 55 · July 29 at 11:21pm
Khattar Phyu Irrawady ကိုတချို့ ကပြောကြတယ် အတင်းအဖျင်းတွေလည်းတင်တယ်တယ့် ၊ အဲ့လို ပြောတဲ့သူတွေကို တခုလောက်ပြောပါရစေ.... နင်တို့ ကိုယ်တိုင်ပဲ အဲ့ Irrawady က တင်တဲ့အတင်း အဖျင်းသတင်းတွေကို စိတ်ပါလို့ ပဲ ဝင်ဖတ်ပြီး comment တောင်ပေးကြသေးတယ်လေ၊ အလကားရတဲ့ သတင်းကို အေးဆေး မဖတ်ကြဘူး ။ လေတယ်
P.S ( သက်ဆိုင်သည့် သူကိုသာ ရည်ရွယ်သည် ၊ မဆိုင်သည့်သူ မရည်ရွယ်)
Like · Reply · 40 · July 29 at 11:05pm
Taung Myot Tharr အရာရာကို အဓိပ္ပါယ် လွဲမှား ကောက်လို့ ရအောင် ရေးတဲ့ အရာဝတီရယ်။ ခင်ဗျားတို့က ပွင့်လင်းမြင်သာ လွတ်လပ် စွာဆိုပြီး ရေးကြီးခွင်ကျယ် အော်နေ ပေမယ့် ''လက်တစ်လုံးခြား'' လုပ်နေတာ ပါပဲဗျာ။ သိပ်မထူးပါဘူး။ ပြောပြန်ရင် လည်း ''မီဒီယာကို ဖိနှိပ်တယ် ခြိမ်း ခြောက်တယ်''ေ...See More
Like · Reply · 37 · July 30 at 1:13am
Aye Myintzu မိန်းမတွေရဲ့ခံစားမှုကိုမိန်းမတွေဘဲသိတယ် ဘဝမှာအဖေဆိုတာမရှိပေမယ့် အောင်မြင်မှုတွေရနေတဲ့လူတွေအများကြီးပါ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့အရည်အချင်းနဲ့သမီးလေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပျိုးထောင်ပါ။သူတို့တွေကသူတို့မှမရှိရင်ဒီမိန်းမတစ်ယောက်ပြိုလဲသွားမယ်လို့ထင်နေကြတာ။အမှားလုပ်ပြီးတောင်းပန်ဖို့ဝန်မလေးတာသူတို့ထုံးစံပါ
Like · Reply · 33 · July 30 at 4:52am
Aye Nyein အဲဒီစကားကိုအရမ်းကြိုက်တယ်
Like · July 30 at 3:42pm
Sai Gyi Irrawaddy journal editor ကြီး ခံဗျား
သတင်းကို ပဲရေးပါ ခင်ဗျား သူများစောက်တင်း မရေးပါနဲ့
သတင်းမှတ်လို့ဖတ်ကြည့်ပါတယ် အချိန်ကုန်တယ်...See More
Like · Reply · 30 · July 30 at 6:18am
May Thu အမမှန်ပါတယ်ခြံခုန်ဖူးတဲ့နွားကထက်ခုန်မှာပဲတခါပဲစိတ်ဆင်းရဲခံနှစ်ခါ
Like · Reply · 28 · July 29 at 10:52pm
Sarah Melay သမီးလေး အတွက် ဖခင်ကောင်းမ
ဟုတ်၇င် Single Mother ကပိုကောင်းပါတယ်...မိန်းမတွေ ၀မ်းနည်း တာေ၇ာ...ဒေါသ တပြိုင်
ခံစား၇တဲ့အချိန်က ကိုယ်ချစ်ခင်...See More
Like · Reply · 27 · July 29 at 11:38pm
Like · Reply · 22 · July 29 at 11:52pm
Kyaw Nanda အော်လူတွေလူတွေထူးအယ်လင်း
အကြောင်းလည်းမသိ သူများအ...See More
Like · Reply · 21 · July 30 at 12:05am